Mitaky Visa amin’ireo olom-pirenena amerikana i Bolivia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Mey 2019 4:11 GMT
Bilaogera maro no tsy miombon-kevitra amin'io fanapahan-kevitra io. Ny sasany milaza fa hisy fiantraikany ratsy amin'ny fizahan-tany izany, satria mandany vola any Bolivia ireo mpizaha tany amerikana. Hugo Miranda aka Angel Caido [ES] tsy mihevitra fa toerana manintona loatra ho an'ny mpizahatany takiana antontan-taratasy be loatra i Bolivia. Mino izy fa afaka manararaotra izany ireo mpifanolo-bodirindrina Shily sy Però mba hisarika mpizahatany vaovao amin'ny karnavaliny manokana. Bilaogera El Alto, Mario Duran avy ao amin'ny Palabras Libres [ES] manontany tena hoe: “Rahoviana isika ao Bolivia vao hahafantatra fa afaka mampidi-bola bebe kokoa noho ny etona voajanahary ny fizahan-tany?”
Vitsy no naneho ny ahiahiny momba ireo olom-pirenena amerikana manana rohy manokana amin'i Bolivia, tahaka ilay boliviana-amerikana Miguel Buitrago avy amin'ny MABB, teraka tany Bolivia, ary efa olom-pirenena Amerikana ankehitriny. Monina any Alemaina amin'izao fotoana izao, mila mangataka visa izy mba hitsidika ny toerana nahaterahany.
Josh Renaud, teratany Amerikana nanambady Boliviana mivezivezy any Bolivia, nitanisa antony efatra izy fa ratsy ity fanapahan-kevitra ity, anisan'izany ny fihatsarambelatsihy. Nanamarika izy fa misy ireo firenena hafa toa an'i Kanada, Aostralia, Meksika, Honduras ary Venezoela izay mangataka amin'ireo olom-pirenena Boliviana mba hahazo visa, “Nahoana i Evo (filohan'i Bolivia) no tsy nangataka fitondrana mifamaly (samy mitaky visa) avy amin'izy ireo (indrindra fa i Venezoelà)? Satria tsy tena miraharaha loatra ny fifampitondrana mifamaly izy. Mazava fa ny “resiprocity” dia fialantsiny fotsiny raha manana politika manohitra ny US “
Na izany aza, mihevitra ny hafa fa zon'i Bolivia ny mampihatra toro-lalana fifampitondrana mifamaly. Sergio Asturizaga, izay mibilaogy ao amin'ny Así como me ves me tienes [ES] mihevitra fa hahita fomba hafa ireo mpizahatany te-ho any Bolivia na dia eo aza izany olana madinika izany.
Anisan'ny nankasitraka ny fanapahan-kevitra i Gustavo Siles ao amin'ny Almada de Noche [ES]. Ho an'ny iray hafa, manantena izy fa mety hahomby kokoa amin'ny asany ny kaonsilà Boliviana. Tsy tena nahomby ny traikefany niaraka tamin'ny kaonsilà ao Madrid.